नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा आएसँगै हवाई यात्रा गर्ने यात्रु घटे
प्रकाशित मिति : : बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०७५
चितवन, ३१ जेठ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा आएसँगै हवाई यात्रा गर्ने यात्रुको चाप घटेकोे छ ।
बिहानको समयमा उडान नहुनु र सडक सहज हुनुका कारण हवाईजहाजको यात्रा गर्नेमा कमी आएको उनले बताए । यस क्षेत्रका व्यवसायीसँग आफ्नै सवारीसाधन भएका कारण जहाजको यात्रा गर्नुभन्दा बिहानको समयमा गाडीमा नै यात्रा गर्ने गरेको प्रमुख गौतमले बताए ।
सडक निर्माणका क्रममा दिनको समयमा सवारी आवागमन रोकिएको र त्यसको चाप बिहान बेलुका परेपछि धेरैको रोजाइ हवाई यात्रा भएको थियो । अहिले पर्यटक आउने समय पनि नभएकाले हवाई यात्रा गर्नेको संख्यामा कमी आएको बुद्ध एयरलाइन्सका शाखा प्रबन्धक भक्तबहादुर बस्नेतले बताए ।
टाटाको एस स्पेसियल एप्लिकेसन नेपालमा
भन्सार कार्यालयद्दारा आठ करोड राजश्व संकलन
डा. केसीको विषयमा गलत समाचार आएपछि प्रचण्डको निजी सचिवालयले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति
नर्सले नै कुटे डाक्टरलाई !
दुर्घटनामा परेका पत्रकार खनालको निधन
उपत्याकामा फोहर व्यवस्थापन नहुँदा चोक र बजार दुर्गन्धित